पुष १४, २०७७ मध्य नेपाल संवाददाता ,
आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडी बढाएर मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने नेकपाका एकझुण्ड नेताहरु धुलोमा खुट्टा बजार्न थालेका छन् । अर्को झुण्ड पनि टसको मस छैन । अझ मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दैछ । विपक्षी दलको पनि पद र स्वार्थकै रौनकले अहिलेसम्म विपक्षीको गहन भूमिका निभाउन नसकेको घाम झैं छर्लङ्ग छ । क्षेत्रीय दल र पूर्व पञ्च रहेका दलमा पनि स्वार्थ मिलेको कहिले देखिएन ।
मुखौटे बोली जस्तो देश र जनताका लागि नै उनीहरुको राजनीति भइदिएको भए कुनै पनि दल र नेताका बज्रस्वाँठ स्वार्थ निरर्थक हुने थिए । तर उनीहरुको राजनीति देश र जनता तर्फकोभन्दा नितान्त निहीत स्वार्थका लागि केन्द्रित हुँदा कुनै पनि राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरुमा मेल छैन । देखावा मेलमिलापले मात्र देश र जनताको हित गर्नै सक्दैन । उनीहरुको स्वार्थ यति हुर्मत काड्ने छ कि, अर्को पदमा भएको देख्न र सुन्न चाहने धैर्यता नै गुमाइ सकेका छन् । अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मञ्चित नाकट यसैको एउटा तुरुप मात्र हो । यहि दलको झण्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको ३ बर्ष कट्न नपाउँदै उनीहरुको पद र लोभको खडा फुटिहाल्यो । त्यसैले अहिलेको सरकार पनि पाँच बर्षको अर्थात स्थिर सरकार नभई कुहिरोको काग जस्तो भएको छ ।
महाधिवेशनले बनाएको अध्यक्ष हटाएर अर्कालाई अध्यक्ष बन्न कति हतार ? त्यसै गरी अर्कोलाई संसदीय दलको नेता बन्न आतुर । आखिर यो सब केका लागि भन्दा सत्ताको सर्वोच्च पद र पार्टीको पनि सर्वोच्च पदकै लागि मात्र न रहेछ । उनीहरुले पनि देशको हितमा काम गर्छन् भन्ने आधार केही छैन । फेरि पहिले पनि पार्टीलाई खुइल्याई पद प्रतिष्ठामा मात्र केन्द्रित रहेका नेताहरुबाट यो पटक पनि जनता निराश पार्ने खेलको विजारोपण नभएको भन्ने छैन । अहिलेको कार्यकारी प्रमुख भएको अर्का नेता पनि पितुर्के र अरुलाई नटेर्ने दम्भी हुँदा नै उनीहरुको स्वार्थ बाझिएको भन्न बाँकी राख्नु पर्ने अवस्था छैन । देखा परिसकेका खुट्टी मध्ये यिनी अलि देशको सीमा सोझ्याउन भने सफल भएका पात्र हुन् । पुराना ३ जनाको भने जनताले खुट्टी नदेखेको होइन । तिनै साविककै नेताबाट फेरि पनि जनताले केही नपाउने र पाँच हजार नेपालीको ज्यानको ठेक्का लिनेहरुबाट खासै उपलब्धी नहुने राजनीतिक विष्लेषकहरुकै तर्क काफी छ ।
पाँच बर्षसम्म पालो कुरेर बस्न नसक्नेले देश र जनताको लागि के नै राम्रो काम गर्छन् र ? भन्ने आधार किन पनि छैन भने देशी विदेशी चलखेल उनीहरुकै पिठ्यूबाट नेपाल छिर्नेमा जनता सशंकित छन् । अहिलेका सत्तामा भएका पितुर्के नेताको अडान मुलुकले ६० बर्ष पहिलेदेखि विर्सेको भूमि वास्तविक नक्सामा ल्याउने दिशामा भने चट्टानी अडान हुँदा सार्थकता सम्म भएको छ । यो नै उनको कार्यकालको सबैभन्दा गतिलो काम भएको देखिन्छ । बाँकी त उनैले बनाएका मन्त्री जो ७ जनाले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनीहरु नै उनको कामका बाधक रहेछन् भन्नेमा घाम झैं छर्लङ्ग भएको छ । यस्तो स्वार्थकै मात्र राजनीति गर्नेहरुबाट नेपाली जनता आजित हुनु अन्यथा होइन । तथापि जनता पनि विकल्पको पार्टी भेट्न सक्ने अवस्थामा हुँदा यिनै अपाच्य राजनीतिक दलका नयाँ पुस्ताको पर्खाइमा दिन कुर्न विभस छन् ।
#राष्ट्रिय राजनीति # राजनीति #उदण्ड स्वार्थको खेती